साँचो प्रेमको अर्थ के हो? सदगुरु यसो भन्छन्... - Dainik Online Dainik Online
साँचो प्रेमको अर्थ के हो? सदगुरु यसो भन्छन्…
प्रकाशित मिति : १ पुस २०७८, बिहिबार ८ : ४९
काठमाडौंl अंग्रेजी अभिव्यक्ति, ‘फलिङ्ग इन लभ’ वा ‘प्रेममा पग्लिनु’ सान्दर्भिक छ, किनकि कोही पनि प्रेममा माथि उक्लिँदैनन् वा प्रेममा विशाल बन्दैनन् ।
तपाईं प्रेममा पग्लिनुपर्छ, किनकि तपाईं जो हो, त्यसको केही अंश नष्ट हुनुपर्छ । तपाईंको सम्पूर्ण हिस्सा नगएपनि, कम्तीमा तपाईंको एउटा अंश समाप्त हुनैपर्छ । तबमात्र त्यहाँ प्रेम सम्बन्ध हुन्छ । तपाईं अर्काको निम्ति आफ्नो केही अंश नष्ट गर्न इच्छुक रहनुपर्छ । मूलत: यसको अर्थ यो हो कि तपाईंको निम्ति स्वयं आफूभन्दा अर्को व्यक्ति निकै बढी महत्त्वपूर्ण भएको छ । दुर्भाग्यवश, अधिकांश मानिसहरूको निम्ति ‘प्रेम’ एक-आपसको लाभ योजना भएको छ ।